Ò Nwere Onye Dị́ Adị Bụ́ Chineke? Chineke ọ̀ dị? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Ee. Baịbụl kwuru ọtụtụ ihe gosiri na Chineke dị. Baịbụl gwakwara anyị ka anyị nwee okwukwe na Chineke. Ma, ọ naghị ekwu ka anyị kweta ihe niile ndị chọọchị na-ekwu. Ihe ọ na-ekwu bụ ka anyị jiri ‘ike iche echiche’ na ‘ikike anyị ji aghọta ihe’ mata nke bụ́ eziokwu banyere Chineke. (Ndị Rom 12:1; 1 Jọn 5:20) Ka anyị lebagodị anya n’ihe ndị a Baịbụl kwuru bụ́ ndị gosiri na Chineke dị:
Otú eluigwe na ụwa si dịrị n’usoro, ihe ndị dị́ ndụ adịkwa n’ime ha gosiri na e nwere Onye kere ha. Baịbụl kwuru, sị: “N’ezie, ụlọ ọ bụla nwere onye rụrụ ya, ma onye rụrụ ihe niile bụ Chineke.” (Ndị Hibru 3:4) Ọ bụ eziokwu na o nwere ike ịdị ka ihe a Baịbụl kwuru enweghị oké ihe ọ bụ, ma ọtụtụ ndị gụrụ oké akwụkwọ kwetara na ihe a o kwuru gbara ọkpụrụkpụ. *
Ọ na-agụsi anyịnwa bụ́ ụmụ mmadụ agụụ ike ịghọta ihe mere anyị ji dịrị ndụ. Ọ bụrụgodị na anyị enwetachaa ihe niile dị́ anyị mkpa ma anyị aghọtabeghị ihe mere anyị ji dịrị ndụ, obi anaghị eru anyị ala. Ihe a anyị chọrọ ịghọta so n’ihe Baịbụl kpọrọ “mkpa ime mmụọ.” Ịmata onye Chineke bụ na ife ya sokwa ná mkpa ime mmụọ anyị nwere. (Matiu 5:3; Mkpughe 4:11) Mkpa a anyị nwere so n’ihe gosiri na Chineke dị adị. O gosikwara na onye kere anyị hụrụ anyị n’anya, chọọkwa ka anyị ghọta ihe mere anyị ji dịrị ndụ.—Matiu 4:4.
E nwere ọtụtụ amụma ndị e dere na Baịbụl ọtụtụ narị afọ tupu oge e kwuru na ha ga-emezu. Ha mezukwara otú e kwuru na ha ga-eme. Otú ha si mezuchaa gosiri na e nwere onye karịrị mmadụ amụma ndị ahụ si n’aka ya.—2 Pita 1:21.
Ndị so dee Baịbụl ma ọtụtụ ihe banyere sayensị karịa otú ndị ha na ha dịkọrọ ndụ ma. Dị ka ihe atụ, n’oge ochie, ọtụtụ ndị kweere na e nwere anụmanụ a dọkwasara ụwa n’elu ya, dị ka enyí, ézì ọhịa, ma ọ bụ oké ehi. Ma, Baịbụl kwuru na ‘ọ dịghị ihe Chineke kokwasịrị ụwa na ya.’ (Job 26:7) Baịbụl kwukwara na ụwa “dị gburugburu” ma ọ bụ okirikiri. (Aịzaya 40:22) Ọtụtụ ndị kwetara na naanị ihe mere ndị so dee Baịbụl ji mara ihe ndị a bụ na ọ bụ Chineke mere ka ha mata ha.
Baịbụl zara ọtụtụ ajụjụ tara akpụ, ndị ọ ga-abụ ma mmadụ amataghị azịza ha, ya ekwerezie na Chineke adịghị. Ụfọdụ ajụjụ ndị ahụ bụ: Ọ bụrụ na Chineke hụrụ anyị n’anya ma ka ihe niile ike, gịnị mere ahụhụ na ihe ọjọọ ji ju n’ụwa? Gịnị mere okpukpe ji emekarị ka ndị mmadụ na-eme ihe ọjọọ kama ịna-eme ihe ọma?—Taịtọs 1:16.
^ para. 4 Dị ka ihe atụ, e nwere otu nwoke nwụrụla anwụ aha ya bụ Allan Sandage. Ọ bụ ọkachamara n’ihe banyere mbara igwe. O kwuru banyere eluigwe na ụwa, sị: “O siiri m ike ikweta na eluigwe na ụwa a dị́ n’usoro pụtara n’onwe ya. A ga-enwerịrị ihe haziri ha ahazi. Ọ ka na-agbagwoju m anya ma Chineke ọ̀ dị. Ma, ọ bụ naanị ikweta na ọ dị ga-eme ka mmadụ ghọta otú ihe niile si malite ịdị.”
Chineke Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
Ànyị kwesịrị ịgba mbọ mata azịza ajụjụ ọtụtụ ndị chere na ọ baghị uru ma ọ bụkwanụ na a gaghị azali ya?
Ònye Bụ Chineke?
Ì chere na Chineke na-eche banyere gị? Mụta banyere àgwà Chineke na otú ị ga-esi bụrụ enyi ya.